February 2009 Blog Posts (45)
G talk ဘာသာပြန်စနစ်ကဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း
G talk ဘာသာပြန်စနစ်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျ။
ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တာ တလွဲပဲ offline ဖြစ်ပြီးတော့ reply မပြန်ပေးဘူး
ဖြစ်နေလို့ ဗျို့ အဆင်ပြေတဲ့လူများရှိရင်ပြောကြပါဦး။
အဆင်ပြေရင်တော့စာကြည့်ရတာမိုက်မယ်ဗျို့ ။ Added by ရခိုင်သားလေး on February 28, 2009 at 3:43pm —
VBS ကလာစားနေလို့ 
virus ၀င်သွားလို့ရှင်းလိုက်တာ ဗျာ
window တက်လာတိုင်း vbs error ဆိုတဲ့ box ကြီးပေါ်ပေါ်လာလို့ ဗျို့ 
သီးမခံနိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ့်လူတို့ ရေဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ပြောကြပါဦး။ Added by ရခိုင်သားလေး on February 28, 2009 at 2:46pm —
1. My mind could change really easily Added by Ei Maung on February 28, 2009 at 10:00am —
IT Professional တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုခံယူသင့်သလဲ ?
IT User တွေဟာ IT Professional တွေရဲ့ ထမင်းအိုးပါဘဲ !
IT User တွေမရှိရင် IT Pro တွေက ဘာတွေဘဲ လုပ်နေနေ အကျိုးမရှိပါဘူး။
နောက်တစ်နည်းပြောရရင်တော့ အသုံးပြုနေကြတဲ့သူတွေကို ဘယ်ဟာဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ knowledge ၊ ဘယ်ဟာကတော့ ဘယ်လောက်အထိ အသုံးဝင်တာ ဆိုတဲ့ knowledge လိုမျိုး IT Professional တွေက
User တွေရဲ့ အနိမ့်ဆုံး knowledge level လောက်အထိစဉ်းစားပြီး educate လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်မထားရင် IT Professional တွေဘဲ တဖြည်းဖြည်းများလာပြီး IT ကိုစိတ်ဝင်စား/လိုက်စားတဲ့သူ… Continue
Added by Win Naing on February 27, 2009 at 4:30pm —
ဗီစီဒီ ဖိုင်တစ်ခုကို Mp3 ပြောင်းချင်လာပြီဆိုရင် ဒီဆိုက်ကအသုံးဝင်လာပါပြီ။ ဒီဆိုက်မှာ files format အမျိုးမျိုးကို ကိုယ်လိုရာ format အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ mp3, wav, wma စတဲ့ files တွေသာမက doc.ppt စတဲ့ဖိုင်တွေကိုပါ
ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို flies ဆယ်ခုအထိ အခမဲ့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ၀င်းကြေးသွင်းရင်တော့ကြိုက်သလောက်
သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပြောင်းချင်တဲ့ဖိုင်ဟာ Computer ထဲမှာရှိရှိ Web ပေါ်မှာပဲရှိရှိ ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ URL ကတော့
Added by ko future on February 26, 2009 at 11:59pm —
Added by manawphyulay on February 25, 2009 at 8:23pm —
MacOSX Leopard on PC [Experience]
Code Sample တွေ၊ Web Design Tutorial တွေကို Mac ပေါ်မှာ လုပ်ပြထားတာတွေ တွေ့ပြီး Mac သုံးချင်နေတာ ကြာပါပြီ... ဒါပေမယ့် အမှန်တစ်ကယ် သုံးချင်တာမဟုတ်ပဲ စမ်းယုံပဲ စမ်းချင်တာမို့ MacOSX Leopard ကို PC မှာ တင်ပြီး စမ်းလိုက်ပါတယ်...
Mac OSX က နဂိုကတည်းက PC အတွက် Design လုပ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် သိပ်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး...
MSI 945 MotherBoard
IntelDuelCore 2.0 CPU
OnBoard Graphic 128MB
Intel AC97… Continue
Added by Ei Maung on February 25, 2009 at 3:30pm —
ဘာကြောင့် Dual Monitor သုံးသင့်တယ်ဆိုတာ(ပိုက်ဆံတတ်နိုင်ရင်ပေါ့ဗျာ) Techradar မှာ ဖတ်ရလို့ ကျနော်တို့ IT မိတ်ဆွေများအတွက် Share လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Original Post at http://www.techradar.com/news/computing/10-reasons-why-you-need-dual-monitors-529164
Added by Win Naing on February 25, 2009 at 12:00pm —
No Comments Job opportunity by obtaining Cambridge’s “Diploma in Teaching with ICT” in Singapore
၀မ်းသားအားရ ဖြစ်ပြီး စာဖောက်ဖတ်တာပေါ့ ။ စာထဲမှာပါတဲ့
စကားဝဲတဲ့ လေသံအတိုင်းရေးထားတဲ့ စာကိုဖတ်မိပြီး စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ရယ်ရမလို၊
ငိုရမလိုဖြစ်သွားလေရဲ့ ။ နောက်ဆုံး ကိုလုံးလည်း အမြင်ကတ်ကတ်နဲ့
ကိုယ်လုံး ... (စတာနဲ့ မှားပြီ.. ယပက်လက်သတ်က… Continue
Added by ko future on February 24, 2009 at 6:30pm —
A bit about Test-driven Development (TDD)
အခုတစ်လော ကျွန်တော် TDD အကြောင်းနည်းနည်းဖတ်မိတယ်...
သိတာလေးတွေနည်းနည်း share လိုက်ပါတယ်..
TDD ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သမားရိုးကျ program ရေးသလို problem တစ်ခုလုံးကိုတစ်ခါတည်း စဉ်းစားပြီး program တစ်ခုလုံးချရေးပြီမှ testing စမ်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲ
အဓိကအပိုင်းလေးကို အရင်စရေးလိုက်၊ testing လုပ်လိုက်၊ test case ကိုမပြေလည်တဲ့အပိုင်းအတွက် code ကိုပြန်ပြင်လိုက်နဲ့ ရေးတဲ့ approach မျိုးကိုပြောတာပါ..
ဥပမာအနေနဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ roman numeral converter ကို TDD approach… Continue
Added by Aung Sithu on February 23, 2009 at 11:00am —
how to update norton? Added by natm1982 on February 23, 2009 at 12:41am —
Complete Favicon Solution
ကျွန်တော်တို့တွေ ဟိုးအရင်တုန်းက icon လုပ်ချင်ရင် icon လုပ်တဲ့ Software ကိုသုံးရတယ်။Photoshop ကိုသုံးပြီး Design ဆွဲပြီးရင် Icon Creator Software (Axialis IconWorkshop) ကိုသုံးပြီး။ Icon တွေကို Generate လုပ်ရတယ်။ (Axialis IconWorkshop) ဆိုတာတော်တော်ကောင်းပါတယ် icon တွေသီးသန့်လုပ်တဲ့ Software ပါ။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အဲလောက်မလိုဘူးလေ ကျွန်တော်က icon professional လုပ်တဲ့သူလည်းမဟုတ်တော့၊ photoshop မှာပဲ Design ဆွဲ ပြီးရင် photoshop မှာပဲ icon… Continue
Added by chan minn maung on February 21, 2009 at 5:18pm —
No Comments ကူညီချင်လွန်းလို့ပါ...
တည်တည်တံ့တံ့နဲ့ စိတ်ဝင်တစားမေးမြန်းသူ၊ ဖြေပေးသူတွေနဲ့ အသက်ဝင်နေတဲ့ ဒီလို နည်းပညာဖိုရမ်ထဲမှာ pro ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ တတ်နိုင်သလောက်လေး ကူညီချင်လွန်းလို့ပါ...
dot net နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ် ဒီဇိုင်းနဲ့ ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ် open source နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ် ဖတ်မှတ်ထားဖူးတဲ့လင့်ခ်တွေ ကိုယ်လေ့လာထားတဲ့ အသိတွေအပြင် ဘလော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုလဲ တော့ပစ်တင်ထားတာတွေ့တိုင်း အချိန်အားရရင်ရသလောက် မြန်မြန်ပြန်ဖြေပေးနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြောင်း ကူညီချင်လွန်း၍ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်ဗျို.... Added by MELODYMAUNG on February 21, 2009 at 7:30am —
No Comments My name is....
Added by manawphyulay on February 20, 2009 at 7:41pm —
မြန်မာ website များတိုးပွားလျက်ရှိ
မြန်မာလူငယ်များ webhosting ပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားမှုများလာ။
Site's URL = http://toiletwall.ning.com
Type = Social Network
Site's URL = http://problemclean.ning.com
Type = Computer Related
Site's URL = http://myessential.ning.com
Site's URL = http://myanmardota.ning.com
Type = Game (DotA) Related
Site's URL =… Continue
Added by Yan Naing Myint on February 20, 2009 at 6:46pm —
kespersky7.0 ကို ဘယ်လိုupdate လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို သိချင်လို့ပါ. ကူညီဖြေရှင်းပေးကြပါအုံး။ အခက်အခဲတွေ့နေလို့ပါ။ Added by natm1982 on February 20, 2009 at 2:00pm —
No Comments Ebook တွေကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်....
Added by manawphyulay on February 19, 2009 at 8:39pm —
ရေလိုက်လွဲနေသော မြန်မာပြည်မှ အချို့  Web Developer လူငယ်များ
ugly devil and pyae sone are now friendsyesterdaycyberboyblog replied to Moe Sweet's discussion The fastest internet (widest bandwidth) in the country?Mondaycyberboyblog postedastatus"i would like to know maximum file size of sqlite"Saturday 0
pyae sone shared their discussion on FacebookRequestSaturdayတေဇာဟိန်း replied to Sithu's discussion Help me for my internet cafe..Fridayတေဇာဟိန်း postedastatus"Router မှာ custom firmware တင်တာက တော်တော်လေးကို ပညာရလာပါတယ်"Friday 0
တေဇာဟိန်း updated their profileFridayတေဇာဟိန်း and MR KONOWA are now friendsFridayayemyathida commented on trh's blog post Simple Burmese OCRJun 13deep joined Skyblue's groupService Experience & Download LinkJun 12 37
deep joined Jake's groupInformation SecurityJun 12 7
pyae sone postedadiscussionRequestJun90